बाल्टीमोरमा गोलीकाण्ड : एक नेपालीको मृत्यु, एक घाइते - बडिमालिका खबर
२७ वैशाख, डिसी — मेरिल्याण्ड राज्यको बाल्टिमोरमा भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा परी एक नेपाली सहित ४ जनाको ज्यान गएको छ । स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान साढे ६ बजे बाल्टिमोरको मुख्य शहर इनर हार्बर देखि ९ माइल उत्तरपश्चिममा भएको गोलीकाण्डमा संखुवासभा खादवारी न.पा. ६, तल्लो पांठा निवासी करिब २५ वर्षीय सागर घिमिरेको ज्यान गएको हो ।
यूनिवर्सिटी अफ मेरील्यान्ड बाल्टिमोर (२२ ग्रीनी स्ट्रीटमा) अस्‍पतालमा अधिकारीको उपचार भइरहेको छ । २६ वर्षीय अधिकारी न्यू मेक्सिकोबाट बाल्टिमोर आएका थिए ।
उक्त घटनाको नेपाली दूतावासले खेद प्रकट गरेको छ । अस्पतालमा उपचाररत अधिकारीलाई भेट्न महवाणिज्य दूत प्रेमराजा महत अस्पताल पुगिसकेका छन् भने राजदूत डा. युवराज खतिवडाले पनि यस घटनामा विशेष चासो देखाएको प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाका अध्यक्ष प्रभु थापाले जानकारी दिए ।